Global Voices teny Malagasy » Rosia : Miverina Ny Tahotra Eo Amin’ny Sehatra Politika, Mihevitra Ny Ho Voafidy Indray i Putine Amin’ny 2018 · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 15 Marsa 2017 16:40 GMT 1	 · Mpanoratra Kevin Rothrock Nandika Nancy
Sokajy: Eoropa Afovoany & Atsinanana, Rosia, Fifidianana, Mediam-bahoaka, Politika, Akon'ny RuNet
Misy lahatsary iray miparitaka amin'ny aterineto Rosiana amin'izao fotoana izao, mampiseho vavy antitra anankiroa matahotra mafy ny mety ho faharesen'i Vladmir Putin. LAhatsary toa noforonina sy mampiseho izay mety hitranga amin'ny taona ho avy, satria ireo Rosiana mpanao politika mpahay teknolojia sy ireo vondron'ny mpikatroka mafana fo, dia miomana ho amin'ny fifidianana filoham-pirenena voalohany ao amin'ny firenena hatramin'ny 2012.
Amin'ity lahatsary manaraka ity, vavy antitra anankiroa no milaza fa ” eo am-panangonana sonia ho an'i Putin”, raha nolazaina fa natoninà ” solombavam-bahoaka iray ao an-toerana” izay nilaza taminy fa lany andro fotsiny izy ireo. Hiala ao Kremlin i Putin, hoy ilay solombavam-bahoaka tamin-dry zareo, ary ny ben'i tananan'i Maosko Sergei Sobyanin no ho filohan'i Rosia hisolo azy.
Nahatezitra ireto mpikatroka anankiroa ireto ity vaovao ity. Nitaraina ny iray tamin'izy roa ireo fa tsy nahita tory hatramin'io fihaonana io, ary ilay namany kosa nametraka ny tànany tandrifin'ny fony, nilaza tamim-pireharehana, ” Putinista izahay ! Ho azy irery izahay !”
Ao amin'ilay lahatsary, hamafisin'ilay vehivavy tanora kokoa ilay tsaho, tamin'alahelo no nilazany tamin'ireo vavy antitra anakiroa tezitra, ” Marina izany, fa toa tsy Putin no hilatsaka ho fidiana fa i Sobyanin.”
Vondrona olom-pirenena any Krasnodar antsoina hoe “Social Justice” — fikambanana mpanohana an'i Putin nalaza noho i Lidiya Arkadevna , mpikambana iray izay nalaza tamin'ny aterineto tamin'ny 2013 noho ny rediredy masiaka sy tsy misy dikany nanoherany ilay lehiben'ny mpanohitra, Alexei Navalny, no nizara ilay lahatsary. Nampatsiahivin'i Arkadevna manokana ilay fiampangana ( tsy marina) izay nilazàn'i Navalny ho ren-tany ren-danitra indray mandeha izay fa nalefany tany aminà toeram-pitsaboana ny vadiny “hivenjivenjy” miaraka amin'ireo mpivarotena.
Raha tsy mbola voaangon'ireo mpikatroka ao amin'ny Social Justice akory ireo sonia hilazana ny fitiavan'ireo Rosiana an'i Vladmir Putin, indraindray ry zareo hita manao hetsi-panoherana eo ivelan'ny biraon'ny Yabloko, ilay antoko politika liberaly tranainy indrindra ao amin'ny firenena, any Krasnodar.
Tsy lahatsary voalohany nalaza natao mba hisarihana ny fisainana ho amin'ny fifidianana any Rosia akory ny fanatontosàna ilay lahatsarin'ireo vavy antitra. Tamin'ny Septambra 2014 no andrana tokana lehibe indrindra , tamin'ilay fotoana nandratran'ireo efa-dahy, nanao akanjonà olona ao aminà sariiaina, lehilahy iray teny an-dàlana. Manana ‘hita’ maherin'ny 12,7 tapitrisa izao io lahatsary io ao amin'ny YouTube.
Fa nahoana no amin'izao fotoana izao no anandraman'ny Social Justice hanozongozonana an'i Sergei Sobyanin, ilay tena mpanao politika nifanandrina tamin'i Alexey Navalny tamin'ny fifidianana ho ben'ny tanàna tamin'ny 2013 ?
Efa an-taonany maro no nisian'ny tsaho fa mety ho i Sobyanin no haka ny toeran'i Putin amin'ny 2018 – indrindra fa tamin'ny nandreseny an'i Navalny tamin'ny 2013. Fitsapana manokana notantànan'i Kremlin no fahitan'ireo manam-pahaizana maro izany.
Ny fanaovana ilay lahatsary nampalaza ireo vavy antitra saro-tahotra manahy ny mety haha-filoha an'i Sobyanin dia tsy mifandray loatra amin'ny ben'ny tanànan'i Maosko fa natao hampahatsiahivana ny olona fa tena ilaina ny rafitra ara-politikan'i Rosia nataon'i Vladmir Putin. Tahatahaka izao ilay hafatra : Atoa Putin, tsy maintsy mifaninana indray amin'ny fifidianana amin'ny taona ho avy ianao, raha tsy izany dia halahelo ihany ireto vehivavy ireto sy ireo olona an-tapitrisa tahaka azy ireo.
Fa ho an'i Sobyanin kosa dia manome izay tsara indrindra avy aminy izy mba tsy hisian'ny olana eo amin'ireo olona nametraka azy ho filohan'ny fitantanana ny tanànan'i Maosko. Raha hiverenana ny tamin'ny 2013, avy hatrany, taorian'ny naharesen'i Navalny, dia nanao fanambaràna  tamin'ny haino aman-jery i Sobyanin fa tsy mihevitra ny hirotsaka ho fidiana ho filoha amin'ny 2018. Roa taona aty aoriana, niverenany indray ilay resaka momba ny fikasany ara-politika, tamin'ny fanambaràny moramora fa mety hirotsaka ho fidiana indray ho ben'ny tanànan'i Maosko izy rehefa tapitra ny fe-potoam-piasany ( amin'ny 2018 ihany koa).
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2017/03/15/95330/
 miparitaka : https://tjournal.ru/40680-mne-azh-ploho-stalo-pochemu-krasnodarskie-pensionerki-aktivistki-ispugalis-prezidentstva-sobyanina
 Lidiya Arkadevna: https://republic.ru/russia/top_5_politicheskikh_internet_frikov_goda-1039911.xhtml
 andrana tokana lehibe indrindra: https://globalvoices.org/2014/09/03/what-went-into-making-russias-most-viral-dash-cam-video-ever/
 nanao fanambaràna : http://www.ntv.ru/novosti/659496/
 tamin'ny fanambaràny : http://tass.ru/politika/2341181